Ny fampiofanana 30 minitra dia mamaha ny fanamby ho an'ny Fampisehoana ho an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Amin'ny Andron'ny Tany, efa manana fanamby Hetsika vaovao ho an'ny mpampiasa Apple Watch izy ity, amin'ity tranga ity fotoam-panofanana 30 minitra. Amin'izay fotoana izay dia efa nanana ny sasany amin'ireo magazainy i Apple voaravaka loko maintso hankalazana ity andro planeta ity.
Amin'io lafiny io dia tsy maintsy asongadintsika ny fahalianan'ny Apple hampiroborobo ny karazana hetsika ekolojika ary andro vitsivitsy lasa izay dia hitantsika ny fomba nanambarana azy fa ny 100% -n'ny fiasan'ny orinasany dia tanterahina miaraka amin'ny angovo azo havaozina ary izao dia mitohy amin'ny fotodrafitrasa fananganana vaovao rehetra. Ankehitriny mba hankalazana ny Andron'ny Tany ny orinasa dia hametraka fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch, mitovy amin'ilay hitantsika tamin'ny taon-dasa.
Amin'ny fampiharana antsasak'adiny dia afaka mamoha isika zava-bita amin'ny fampiharana fampiharana sy sticker sasany mitovy amin'ireo natolotra tamin'ny taon-dasa (sary ambany). Amin'ity tranga ity, ny sitckers dia azo alefa amin'ny fampiharana Messages ary mihoatra ny zava-bita ho an'i Apple, zava-bita ho an'ny mpampiasa izany, izay hanao hetsika ara-batana mandritra ny antsasak'adiny. Ireo karazana "fanamby" ireo dia antony manosika ireo izay tsy manao fanatanjahan-tena be loatra ary tsy isalasalana fa fomba tena tsara iray hifaneraserana amin'ny fanaovana spaoro
Raha manana Apple Watch ianao dia tandremo ny alahady 22 aprily ho avy izao, satria io no fotoana tokony hanaovantsika ny fanambin'ny: mandany mihoatra ny 30 minitra manao fanatanjahan-tena any ivelany. Raha vitantsika io dia homen'i Apple ny zava-bita sy sticker isan-karazany manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny fampiofanana 30 minitra dia mamaha ny fanamby ho an'ny Fizarana manaraka ho an'ny Apple Watch
Mpitroka taitra ho an'ny HomePod; veloma hovitrovitra